Amin'ity zoma ity Harry Potter: tonga any Etazonia sy UK | Androidsis
Niantic dia efa vonona ny zava-drehetra amin'ny famoahana an'i Harry Potter: Wizards Unite ho an'ny 21 jona, na dia hanao izany aloha any Etazonia sy United Kingdom; araho hatrany satria hilatsaka ny APK tsy ho ela.
Ireo meloka amin'ny fandefasana ny Pokémon GO lehibe dia hitondra antsika amin'ity indray mitoraka ity ny adin'i Harry Potter hanitrika ny tenantsika amin'ny zava-misy mitombo ary ho mpandray anjara amin'ny Hogwards College ny majia sy ny famosaviana. Hetsika iray manontolo no manjo antsika.
avy amin'ny Kaonty Twitter an'i Niantic Harry Potter: nambara tamin'ny 21 Jona ireo mpamosavy. Ny tiako holazaina, roa andro manomboka anio. Ho an'izany, navoaka ny tranofiara vaovao izay mamporisika ny fampisehoana bebe kokoa sy amin'ny fametrahana an'ity lalao vaovao ity ho an'ny finday.
Ny fahasamihafana misy eo amin'i Pokémon GO sy Harry Potter: Wizards Unite dia raha mbola manangona Pokémon isika amin'ny voalohany, amin'ny faharoa dia tsy maintsy hitadiavantsika ny «meltable» izay mamindra ny faritra.
Amin'izao fotoana izao tsy fantatray ny datin'ny fanombohana manerantany, fa raha mifototra amin'ny zava-nitranga tamin'i Pokémon GO isika, dia tsy ho ela dia hanome ny fanombohana ny iray amin'ireo lalao andrasana indrindra amin'ny taona. Voalohany ho an'ireo mpankafy ny saga Harry Potter ary ho an'ireo izay manaraka an'i Niantic amin'ny asany lehibe ao amin'ny Pokémon GO.
toy izany Anio zoma izao no hisokatra ny fanakatonana an'i Harry Potter: Wizards Unite ary izany zava-misy nampitomboina izay hanery antsika hitady ny ody famosaviana, mitafy kapa ary hivoaka eny an-dalambe mba handinika ny zava-niainan'ny iray amin'ireo olona noforonina malaza indrindra ankehitriny. Aza adino ny misoratra anarana manana ny fampandrenesana amin'ny fampandrenesana ny findainao mba hilalaovana ny voalohany hatramin'ny fahatongavany lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Harry Potter: Wizards Unite dia mandefa ny 21 Jona amin'ny Android
Ny fampiharana fakan-tsary MIUI dia manamafy fa miasa amin'ny smartphone i Xiaomi miaraka amina sensor 64 MP